Yobhi 22 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
22 Waza waphendula uElifazi umTeman wathi: 2 “Ngaba indoda eyomeleleyo inokuba luncedo kuThixo,+ Ukuba nabani na onengqiqo ufanele abe luncedo kuye? 3 Ngaba uSomandla uyayoliswa kuba ulilungisa,+ Okanye uyazuza kuba usenza indlela yakho ingabi nakusoleka?+ 4 Ngaba uya kukohlwaya ngokuhlonel’ uThixo kwakho, Ngaba uya kuza nawe ekugwebeni?+ 5 Ngaba ububi bakho abusele bubukhulu ngokugqithiseleyo,+ Yaye ngaba iziphoso zakho aziyi kuphela? 6 Kuba uthimba isibambiso kubazalwana bakho ngaphandle kwesizathu,+ Uhluba kwanezambatho zabantu abaze. 7 Akumniki odiniweyo amanzi asele, Nolambileyo umbandeza isonka.+ 8 Ke yona indoda enamandla, ilizwe lelayo,+ Yaye lowo uphathwa ngokukhetha ubuso uhlala kulo. 9 Abahlolokazi ubandulula belambatha, Neengalo zamakhwenkwe angenayise ziyatyunyuzwa.+ 10 Kungenxa yoko ujikelezwe zizibatha,+ Nento enkwantyisa ngequbuliso ikuphazamisa; 11 Okanye ubumnyama, ukuze ungaboni, Namanzi amaninzi ayakugubungela. 12 Ngaba uThixo akakokuphakama kwezulu?+ Bona kwanazo zonke iinkwenkwezi,+ ukuba ziphakamile. 13 Sekunjalo uthe: ‘Wazi ntoni na ngokwenene uThixo? Ngaba unokugweba esithokothokweni? 14 Amafu ayindawo yakhe yokuzifihla ukuze angaboni, Yaye uhambahamba kumagumbi angaphantsi ezulu.’ 15 Ngaba uya kuqhubeka kwindlela yakudala Anyathele kuyo amadoda enzakalisayo, 16 Amadoda axhwilwe phambi kwexesha lawo,+ Isiseko sawo+ esikhukuliswe njengomlambo, 17 Athi kuTHIXO oyinyaniso: ‘Mka kuthi!+ Yaye yintoni anokuyifeza nxamnye nathi uSomandla?’ 18 Kanti nguye ozalise izindlu zawo ngezinto ezilungileyo;+ Yaye icebo labo bangendawo ulibhekisele kude kum.+ 19 Abo bangamalungisa baya kubona babe nemihlali,+ Yaye lowo umsulwa uya kubagculela: 20 ‘Eneneni abo bachasene nathi batshayelwe; Yaye okuseleyo kwabo kuya kudliwa ngumlilo.’ 21 Khawuncede, uziqhelanise naye, uze ugcine uxolo; Ngaloo ndlela izinto ezilungileyo ziya kuza kuwe. 22 Nceda, uthabathe umthetho emlonyeni wakhe, Uze ubeke amazwi akhe entliziyweni yakho.+ 23 Ukuba ubuyela kuSomandla,+ uya kwakhiwa; Ukuba intswela-bulungisa uyigcina kude nentente yakho, 24 Ukuba isimbiwa esixabisekileyo sibekwa eluthulini Negolide yakwaOfire+ kwiliwa lentlambo, 25 KwanoSomandla uya kuba sisimbiwa sakho esixabisekileyo ngokwenene, Kwanesilivere, eyona ixabisekileyo kuwe.+ 26 Kuba uya kwandula ufumane ukuyoliswa ngokugqibeleleyo nguSomandla,+ Uze ubuso bakho ubuphakamisele kuThixo.+ 27 Uya kumbongoza, aze akuve;+ Nezibhambathiso zakho uya kuzifezekisa.+ 28 Uya kugqiba kokuthile, yaye kuya kuma; Yaye ngokuqinisekileyo ukukhanya kuya kukhanya ezindleleni zakho.+ 29 Kuba kuya kubakho ukuthotywa xa uthethe ngokuzikhukhumalisa;+ Kodwa lowo unamehlo aqondele phantsi uya kumsindisa.+ 30 Uya kumhlangula umntu omsulwa,+ Yaye ngokuqinisekileyo uya kuhlangulwa ngenxa yokuhlambuluka kwezandla zakho.”+